व्यवस्थित बन्दै गएको इन्जिनियरिङ धितो मुल्याङ्कन व्यवसाय-Setoghar
ई. सञ्जय महतो, उपाध्यक्ष, नेपाल भ्यालुएर्स एसोसिएसन
सिरहाको गोलबजारका स्थायी बासिन्दा महतो पोखरामा जन्मिनुभएको हो । बुबाको जागिरको कारण विभिन्न ठाऊँमा घुम्दै उहाँले अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसकारण मैले आधा दर्जन भन्दा बढी विद्यालयबाट अध्ययन गरेर विद्यालय तहको अध्ययन पूरा गर्नुभयाे । साथै जनकपुरबाट आइ.एस्सी र पोखरा विश्वविद्यालयबाट वि.ई तहको अध्ययन पूरा गर्नुभएको हो ।
धितो मूल्याङ्कन क्षेत्रको महत्व :
नेपालमा घर तथा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य निकै पहिले देखि नै चल्दै आएको हो । विगतमा यस क्षेत्रको दायरा साँघुरो थियो भने अहिले यस क्षेत्रको दायरा फराकिलो भएको छ । साथै मूल्याङ्कनकर्ताको कार्यक्षेत्र समेत विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यवसायीहरुको अवस्था राम्रो छ । यद्यपि यो व्यवसाय आफैंमा निकै नै जोखिमपूर्ण व्यवसाय समेत हो ।
मूल्याङ्कनकर्ताहरु संगठित हुने प्रयाश :
भारतमा करिब १ शतक देखि नै मूल्याङ्कनकर्ता व्यवसायीहरु आपसमा सङ्गठित हुने अभ्यास शुरु भएपनि नेपालमा भने व्यवसायीहरु सङ्गठित भएको अझै १ दशक पनि भएको छैन । यो प्रशङ्ग हाम्रो बार्षिक कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा उपस्थित गभर्नरज्यूले समेत उठाउनुभएको थियो । वास्तवमा यस क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने क्रममा कर्जा प्रवाह गर्नको निम्ति निकै महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
संस्था स्थापना गर्ने समयमा नक्कली कागजपत्रको आधारमा व्यवसायीहरुलाई फसाइने प्रचलनले हामी हैरान थियौं । यस किसिमको अवस्थाको विरुद्ध आवाज उठाउन र यस क्षेत्रलाई स्वस्थ र व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर हामी अघी बढेका हौं । अहिले हामीले यस क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायीहरुलाई आवश्यक प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबीच आपसी समन्वय कायम गर्ने लगायतका योजनाहरु सहित हामी अघी बढेको कारण अहिलेको अवस्थामा आउन सफल छौं ।
नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसन :
यो संस्था वि.सं २०६८ मा स्थापना भएको हो । त्यस समयमा यस संस्थामा ७ जना इन्जिनियरहरु मात्र संलग्न थियौं । तर अहिले भने यसको सञ्जाल निकै नै विस्तार भएको छ । साथै यस क्षेत्रको अवस्था सुधार हुँदै गएको कारण हामीलाई अहिले यस क्षेत्रमा रहेर काम गर्न निकै सहज समेत छ । यद्यपि अहिले पनि कतिपय व्यक्तिको जग्गा मूल्याङ्कन गर्दा विभिन्न समस्या समेत सृजना हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । जग्गा मूल्याङ्कनको क्रममा एक व्यक्तिको जग्गा अर्कोलाई देखाउने अवस्था समेत छ । यस्ता कुरामा सम्भव भएसम्म हामी मूल्याङ्कनकर्ता सचेत बन्नु जरुरी छ ।
व्यवसायमा आएको परिवर्तन :
नेपालमा म यस व्यवसायमा विगत १३ बर्ष देखि संलग्न छु । यस क्रममा यो व्यवसायमा निकै नै परिवर्तन आएको छ । विगतमा म यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा यस क्षेत्रको बारेमा प्राविधिक तथा व्यावहारिक ज्ञान लिन सक्ने आधारहरु न्यून थिए । तर अहिले भने यस क्षेत्रलाई नीतिगत दायरामा ल्याई निश्चित पद्धतिको आधारमा अघी बढाउनको लागि पहल भइरहेको छ । मूल्याङ्कनका विभिन्न अवधारणाहरु विकास भएका छन् ।
भ्यालुयर्स एसोसिएसनको अवधारणा :
हामीले यस संस्थाको अवधारणा अघी बढाउँदा यस क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरुका विभिन्न बाध्यताहरु थिए । यस क्षेत्रमा रहेर काम गर्न स्पष्ट नीति समेत थिएन । कस्तो काम गर्न हुने, कस्तो गर्न नहुने ? भन्ने लगायतमा समेत हामीलाई जानकारी थिएन । त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो संघको परिकल्पना गरेका हौं । एसोसिएसन यस क्षेत्रमा आवद्ध सबै व्यवसायीहरुको हक, हित र अधिकारको लागि सामुहिक पहलमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सहित यो संघ अघी बढेको हो ।
संघबाट सामुहिक आवाज उठाउन सहज :
संस्था स्थापना गर्ने समयमा नक्कली कागजपत्रको आधारमा व्यवसायीहरुलाई फसाइने प्रचलनले हामी हैरान थियौं । यस किसिमको अवस्थाको विरुद्ध आवाज उठाउन र यस क्षेत्रलाई स्वस्थ र व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर हामी अघी बढेका हौं । अहिले हामीले यस क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायीहरुलाई आवश्यक प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबीच आपसी समन्वय कायम गर्ने लगायतका योजनाहरु सहित हामी अघी बढेको कारण अहिलेको अवस्थामा आउन सफल छौं । हामीले जुन उद्धेश्यको साथ संस्थाको परिकल्पना गरेका थियौं । त्यसबमोजिम हाम्रा गतिविधिहरु अघी बढाउन सफल भएका छौं । यद्यपि संघमा सदस्यता विस्तारको निम्ति हामीले थप पहल गर्नु जरुरी छ । अहिले हाम्रो यस संस्थामा ४ सय भन्दा बढी सदस्यहरु आवद्ध छन् ।
संघको उद्धेश्य :
यो संघ व्यवसायीहरुले स्वस्थ तवरले नै काम गर्न सकुन् भन्ने मान्यता लिएर अघी बढेको छ । राम्रो तवरले काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहन र गलत काम गर्नेलाई दण्डसजायको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संघको मान्यता छ । राम्रो नियतले नै व्यवसायीले काम गर्दागर्दै र राम्रो तवरले नै व्यवसायलाई अघी बढाइरहँदा पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरु आउन सक्ने अवस्थामा उक्त समस्यालाई राम्रो तवरले अध्ययन गरी त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरु मध्ये कुन पक्षको कस्तो संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन भई सोही बमोजिम आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघी बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा संघ छ ।
मूल्याङ्कनकर्ता सचेत रहनुपर्छ :
ग्राहकहरुले आफ्नो सम्पत्तिको उच्च मूल्याङ्कन हुन सकोस् भन्ने मान्यता सहित हामी मूल्याङ्ककर्ताहरुलाई आग्रह गर्ने अवस्था अहिले पनि कायम छ । यसरी ग्राहकको आग्रह बमोजिम प्रलोभनमा परेर मूल्याङ्कनकर्ताले उक्त सम्पत्तिको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यसबाट समस्या सृजना हुने सम्भावना अधिक रहन्छ । यसबाट सम्बन्धित ग्राहकको अलावा मूल्याङ्कर्ता समेत फस्न सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । कतिपय ग्राहकहरुले नियतवश नै मूल्याङ्कनकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी काम गर्न सक्नेतर्फ समेत हामी पहिले नै सतर्क रहनु जरुरी रहन्छ ।
आफ्नै व्यवसायको रुपमा नेपाल डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट :
मेरो बुबा पनि इन्जिनियर नै हुनुहुन्थ्यो । मैले ऊहाँको जागिरे जीवनलाई समेत मैले नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यसैकारण म भने आफ्नै कार्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले मैले यो कम्पनी स्थापना गरेको हुँ ।
सफलताका लागि आवश्यक पर्ने तत्वहरु :
म नेपालमा नै रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले अघी बढिरहँदा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता पाउन मेहनत, शिक्षा, इमान्दारिता र भाग्यको संयोग हुनुपर्छ भन्ने सिकेको छु ।
‘पसिना’ नामक चलचित्र समेत रिलिज गर्दै महतो :
म र मेरो साथी निश्चल सर्मा अध्ययन गर्ने समय देखि नै नेपालमा नै रहेर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिवद्ध थियौं । अहिले हामीले नेपाली युवाहरुलाई नेपालमा नै रहेर केही गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुलाई समेटेर प्रोत्साहनमूलक ‘पसिना’ नामक चलचित्र समेत निर्माण गरेका छौं । उक्त चलचित्र बैशाखमा रिलिज हुँदैछ ।
आगामी योजना :
नेपालमा आफूले सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीलाई राम्रो तवरले सञ्चालन गर्ने, मूल्याङ्कन क्षेत्रलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने साथै चलचित्र क्षेत्र मार्फत समेत अघी बढ्ने गरी मुख्य ३ योजना सहित म आफूलाई अघी बढाइरहेको छु । नेपालमा हामी संलग्न रहेको मुल्याङ्कन क्षेत्रलाई राम्रो तवरले अघी बढाउन सर्वप्रथम यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरु आफैं सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।